iPhoto Kaadị: Mee kaadị ekele na Mac iji iPhoto Kaadị Nrụpụta
iPhoto bụ akụkụ nke iLife ngwa Suite na mgbakwunye na iMovie, iDVD, iWeb, na na. Ọ ike ịhazi foto gị site na ihu, ebe ndị na-ihe. Ị nwekwara ike iji ya na-dezie gị dijitalụ photos na ala. Ndị kasị mma echiche na-na i nwere ike ime ya ọzọ na foto gị, eg, foto akwụkwọ, kaadị ekele, kalenda, na obere akpa foto. Taa, ị ga-amụta otú iji nke a Mac ekele kaadị software na-eme ka ekele kaadị.
Part 1: Olee ka iPhoto kaadị ekele
Part 2: More ekele Kaadị Software maka Mac
iPhoto adịghị mma ekele kaadị software na Mac, ma ọ bụ mfe iji, na ị na-apụghị ileghara anya na mara letterpress kaadị ahaziri na foto gị na ederede. Ị dị njikere ime? -Ahụ ugbu a n'okpuru banyere esi mee ka iPhoto kaadị.
Nzọụkwụ 1. Mepụta ekele Kaadị na Họrọ Theme
Iji mee ka ekele na kaadị iPhoto, nzọụkwụ mbụ bụ na-pịa na "+" akara n'okpuru Isi Iyi List na họrọ Kaadị site na listi. Ọzọ pịa bọtịnụ n'elu ndepụta nke gburugburu na họrọ ekele Kaadị si dapụtara menu. Họrọ a ekele kaadị isiokwu na pịa Họrọ bọtịnụ.
Ịzụta kaadị ekele si Apple, i nwere ike pịa "Nhọrọ + Ahịa" button ga-emeghe iPhoto Bipute Ngwaahịa ibe weebụ, nke ga-egosi gị na kaadị nkọwa na ịnye ọnụahịa ọmụma.
Nzọụkwụ 2. Tinye Foto na Text
Na Kaadị Windows, ị ga-ahụ họrọ isiokwu, nakwa dị ka họrọ photos n'elu. Nanị ịdọrọ na dobe foto gị ekele kaadị. Ị nwekwara ike ịgbakwunye foto site Isi Iyi ndepụta.
The n'ime peeji ekele gị kaadị uche-enye gị ohere ọsọ ọsọ ederede. Pịa ederede igbe na pịnyere gị onwe gị ozi maka kaadị.
Nzọụkwụ 3. Mee ekele Kaadị Ntọala
E nwere ọtụtụ ntọala atụgharị gị ekele kaadị na-ahaziri, gụnyere kaadị ndabere, kaadị imewe, na kaadị ikuziri. Pịa Background bọtịnụ na ala ịgbanwe kaadị ndabere. Site ndabara, gị kaadị ekele nwere kehoraizin nghazi, N'otu aka ahụ na ndabere mgbanwe, pịa Usoro ka ịgbanwee gaa na Portrait ikuziri.
Kasị ekele kaadị gburugburu na-enye dị iche iche n'ihu na azụ aghụghọ. Iji hụ n'ihu / azụ nhọrọ, họrọ ma na n'ihu ma ọ bụ azụ gị kaadị wee pịa Design bọtịnụ ịtọ gị aghụghọ.
Nzọụkwụ 4. Bipute ma ọ bụ zụta ekele kaadị
Ozugbo gị kaadị ekele dị njikere, ị nwere ike bipụta ya si na gị ejikọrọ na ngwa nbipute ma napụta ya site mail. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ Email na ekele kaadị, ị nwere ike mbupụ ya dị ka a PDF faịlụ na-ezite dị ka email mgbakwunye. Iji mee ka nnukwu kaadị ekele, ị ga mma ịzụta kaadị ekele si Apple. Otú a, ị ga-nwetara gị kaadị ekele na 2-3 izu. Ị nwere ike ịga Apple si website maka ozi ndị ọzọ banyere iPhoto ekele kaadị, ihe ọ bụla ọ bụ banyere iPhoto kaadị Ndinam ma ọ bụ nnyefe.
Ọ bụ ezie na iPhoto pụrụ inyere gị aka mfe ike a kaadị, ndebiri bụ nnọọ nta. Lee, anyị depụta ọzọ ekele kaadị Ndinam software n'ihi na ị na-Mmasị ịke. N'agbanyeghị ihe na oge bụ, ndị a software nwere ike nye Creative ngwọta.
Wondershare iCollage for Mac Bụ otu nke kasị mma mac ekele kaadị software, nke na-agụnye ihe wuru na-foto akwụkwọ ndebiri, ekele kaadị ndebiri, kaadị ndebiri karịa iPhoto. Ọzọ dị iche bụ na iCollage for Mac-enye gị ohere ibipụta kaadị onwe gị na a na ngwa nbipute. Otú a, ị pụrụ n'ụzọ dị mfe ka gị onwe gị kaadị.
# 2. Ji mara Kaadị Studio maka Mac
Ji mara Kaadị Studio maka Mac-enye dị iche iche kaadị ekele ndebiri na ị nwere ike hazie. Ọ na-enye gị ohere ike gị onwe gị imewe site ọkọ. Ị nwere ike mfe chọta a kaadị maka dị iche iche n'oge na-agbanwe sụgharịa hazie ya.
# 3. The Bipute Shop
The Bipute Shop na-juru n'ọnụ na tọn mfe ederede na okirikiri nhọrọ ukwuu ngwaọrụ, fun clip na nkà na ndebiri, na oké foto edezi ngwaọrụ - ihe niile ị chọrọ ka gị onwe gị kaadị ekele na dị nnọọ nkeji.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Mee kaadị ekele na Mac iji iPhoto Kaadị Nrụpụta